Bezzia waa degel websaydh ka tirsan kooxda weyn ee Internetka AB. Boggeenu wuxuu u heellan yahay haweeneyda maanta jirta, haween madax-bannaan, dadaal badan oo walaac leh. Ujeedada Bezzia waa inay akhristaha u diyaariso wararka ugu dambeeya ee moodada, quruxda, caafimaadka iyo hooyada, iyo kuwo kale.
Tifaftirayaasha kooxdayada ayaa ku takhasusay dhinacyada sida cilmu-nafsiga, barbaarinta, moodada iyo quruxda ama caafimaadka. In kasta oo ay laamo kala duwan oo xirfadeed leeyihiin, haddana dhammaantood waxay wadaagaan ujeedo guud, hammuun isgaarsiineed. Waad ku mahadsan tahay kooxda tifaftirka Bezzia, sanadihii ugu dambeeyay degelkeennu wuxuu sii gaarayay akhristayaal badan. Balanteenu waa inaan sii wadno koritaanka oo aan siino waxa ugu fiican.
El Kooxda tifaftirka Bezzia Waxay ka kooban tahay tifaftireyaasha soo socda:
Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda qoraalka Bezzia ama mid ka mid ah websaydhadeena kale ee loogu talagalay dhagaystayaasha haweenka, buuxi foomkan.
Qoraa, turjubaan, baloog iyo hooyo. Waxaan ku dhashay magaalada Barcelona dhowr iyo soddon sano ka hor, muddo dheer igu filan inaan la qabsado fanka, moodada, muusiga iyo suugaanta. Dabeecad ahaan iyo xoogaa taxaddar la'aan dabiiciyan ah, markasta ka feejignow inaadan u seegin wax kasta oo noloshu na siiso!
Tan iyo markii aan yaraa waxaan cadeeyay in arintaydu ay ahayd inaan macalin noqdo. Sidaa awgeed, waxaan haystaa shahaadada Ingiriisiga Filolojiyada. Wax si dhammaystiran loogu dari karo xiisaha aan u qabo moodada, quruxda ama arrimaha socda. Haddii aan ku darno muusig yar oo dhagaxa ah waxaas oo dhan, waxaan horeyba u haysannay liistada oo dhan.
Soddon sano jir ah oo leh daraasado qaar oo loogu talagalay adduunka injineernimada, waxaa jira damacyo badan oo waqtigayga ku mashquulsan. Waxaan fursad u helay inaan barto mid ka mid ah, muusigga; Tan labaad, cunto karinta, aniga ayaa is-baray. Tan iyo markii aan u shaqeeyey sidii dameerkeyga hooyaday, waxaan xasuustaa inaan ku raaxeystay hiwaayaddan aan hadda idinla wadaagi karo iyada oo ay ugu mahadcelinayaan Blog-ga Actualidad Waxaan ka sameeyaa Bilbao; Waligay halkaan ayaan degenaa, in kastoo aan isku dayo inaan booqdo dhammaan meelaha ay suurta gal tahay inaan ku qaato boorsada garabkayga.
Hooyo, macalinka waxbarashada khaaska ah, cilmu-nafsiga iyo xiisaha qoraalka iyo isgaarsiinta. Taageeraha qurxinta iyo dhadhanka wanaagsan Waxaan marwalba kujiraa waxbarasho joogto ah ... sameynta hamigeyga iyo hiwaayadeyda, shaqadeyda. Waad soo booqan kartaa degel shaqsiyeed in laga feejignaado wax walba.
Aniga oo raadinaya nooca ugu fiican nafteyda, waxaan ogaaday in fure u ah nolosha caafimaadka ay tahay isku dheelitirnaan. Gaar ahaan markii aan noqday hooyo oo ay ahayd inaan naftayda dib ugu biiriyo qaab nololeedkayga. U adkaysiga fikirka nolosha, la qabsiga iyo barashada ayaa ah waxa maalin kasta iga caawiya inaan maqaarkayga ku fiicnaado. Waxaan jeclahay wax kasta oo gacmo lagu sameeyo, moodada iyo quruxda igu wehelisa maalinba maalinta ka dambaysa. Qoraalku waa hamigeyga iyo sanadaha qaar, xirfadeyda. Igu soo biir waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho isku dheelitirkaaga si aad ugu raaxaysato nolol buuxda oo caafimaad leh.
Adoo haysta shahaadada Xayeysiinta, waxa aan ugu jeclahay waa qorista. Intaa waxaa dheer, waxaa i soo jiitay wax kasta oo bilic ahaan raalli ka ah oo qurux badan, waana sababta aan u jeclahay qurxinta, moodada iyo tabaha quruxda. Waxaan ku siiyaa talooyin iyo figrado si ay uga dhigaan kuwo waxtar u leh dadka kale.
Ardayga cilmu-nafsiga, kormeeraha waxbarashada iyo hiwaayadaha badan. Mid ka mid ah hamidaydu waa qorista midna daawashada fiidiyowyada iyo akhrinta wax kasta oo la xiriira quruxda, qurxinta, isbeddellada, is qurxinta, iwm ... Marka meeshani waa mid hagaagsan tan iyo markii aan sii dayn karo waxa aan jeclahay oo aan isku darin labada hiwaayad. Waxaan rajeynayaa inaan idinla wadaagi doono waxaan ka ogahay mowduuca iyo inaad adiguba, iga caawin doontid inaan kusii wado barashada mowduucan faalooyinkaaga. Waad ku mahadsantahay akhrinta Bezzia.
Khabiir ku ah shabakadaha bulshada iyo internetka iyo moodada. Waxaan jecelahay inaan la socdo wararka ugu dambeeya iyo tilmaamaha ku saabsan quruxda dumarka. Hadaad rabto inaad iftiimiso, ha ka waaban oo i soo raac!
Blogger, naqshadeeye, maareeyaha bulshada ... nasasho la'aan iyo dano badan oo madaxayga igu keenaya. Anigu waxaan ku faraxsanahay moodada, shineemooyinka, muusikada ... iyo wax kasta oo la xiriira arrimaha socda iyo isbeddellada. Waxaan ahay reer Galician afarta dhinacba, waxaan ku noolahay Pontevedra inkasta oo aan isku dayo inaan u dhaqaaqo intii karaankeyga ah. Waxaan sii wadayaa barashada iyo barashada maalin kasta, waxaanan rajaynayaa in marxaladan cusub ay lamid tahay ajar badan.
Anigu waxaan ahay cilmi-nafsi yaqaan iyo qoraa, waxaan jeclahay inaan ku dhex daro aqoonta fanka iyo fursadaha badan ee male-awaalka ah. Qof ahaan, sidoo kale waxaan jecelahay inaan dareemo wanaag naftayda ku saabsan, markaa halkan waxaan kuugu soo bandhigayaa talooyin fara badan oo aad ku qurxoon karto isla markaasna wanaag ku jirto.
Waxaan ku dhashay Malaga, halkaas oo aan ku barbaaray kuna bartay, laakiin hadda waxaan ku noolahay magaalada Valencia. Anigu waxaan ahay naqshadeeye farshaxan xirfadeed, in kasta oo hamigayga ku saabsan karinta fudud iyo caafimaadka leh ay igu hoggaamisay inaan naftayda u huro waxyaabo kale. Cunto xumo xaga qaan-gaarnimadayda, ayaa ii horseeday inaan daneeyo jikada ka caafimaad badan. Intaa wixii ka dambeeyay, waxaan bilaabay inaan ku qoro cuntooyinkeyga boggeyga "The Monster of Recipes", oo ka sii nolol badan weligiis. Hadda waxaan fursad u helay inaan sii wado wadaagista cuntooyinka xiisaha badan ee baloogyada kale mahadsanid Actualidad Blog.
Salaan! Waxaan ahay Marta, cilmiga bulshada iyo xiisaha carruurta. Waxaan sameeyaa fiidiyowyo ku saabsan alaabta carruurtu ku ciyaaraan oo kuwa yaryar ee guriga jooga ay ugu jecel yihiin. In lagu maaweeliyo iyaga ka sokow, waxay awood u yeelan doonaan inay helaan aqoon ka caawin doonta geeddi-socodkooda waxbarasho iyo bulsheed, barashada la xiriirka qoyskooda iyo deegaankooda si caafimaad iyo farxad leh.
Gabadh Geek ah oo xiiseysa taxanaha, buugaagta iyo bisadaha. Balwad shaah. Anigu waxaan ahay naag aad u Spanishishzed Polish ah oo sidoo kale jecel fashion waxaanan u maleynayaa inaan keeni karo aragti cusub oo asal ah oo ku saabsan. Shaqooyinkeena kala duwani waxay naga dhigayaan kuwo gaar ah waana inaan ka faa'iideysanaa, shaqsiyadeena ayaa ah furaha guusha iyo farxadeena.
Sawirka meeleynta Carmen Espigares
Cilmu-nafsiga, takhasuska HR iyo maareeyaha bulshada Granaína nolosha oo dhan iyo himilooyinka doonaya in la gaaro. Waxyaabaha aan xiiseeyo Ku hees heesta qubeyska, falsafada saaxiibbaday oo arag meelo cusub. Akhriste xariif ah ayaa had iyo jeer diyaar u ah inay la kulanto caqabado cusub iyadoo dhoola caddeynaya wejigeeda. Socdaal, qoris iyo barasho waa hamidayda weyn. Tababbarka joogtada ah iyo ku-tababbarka nolosha, maxaa yeelay ... iyo maxay tahay waxa ay ugu yeeraan noolaanshaha haddii aynaan ka qoynin waxa ay na siiso oo dhan ...?
Farshaxanno, farshaxanno, dib u warshadeyn hal abuur leh, hadiyado asal ah, qurxin, dabaaldegyo ... DHAMMAAN HANDMADE.